Shiinaha Khafiifa Wide Strip for galaas taarikada kulul kulul soo saaridda iyo Warshad | Shougang
Sida shirkad xirfadlayaal ah oo baareysa aaladda kululeynta korontada, waxaan ugu tala galnay khafiif khaas ah oo balaaran oo loogu talagalay kuleylinta qaybaha saxamada kulul ee dhalada.
Darajooyinka birta iyo walxaha kiimikada
Darajooyinka birta ah
cunsur dhulka ku yar
Qaddarka ku habboon
Heerkulka ugu badan ee adeegga
xoog siliggaN / mm²)
Iyada oo ku saleysan balaastigga wanaagsan ee alloysyada, waxay leeyihiin qaab dhismeed shaqo qabow oo wanaagsan. Isbeddelka isbeddelka alloysku waa yar yahay, qiimaha caabbinta mitirkiiba kama badna afar boqolkiiba, taas oo keenaysa in aaladuhu ay faa'iido u leeyihiin xitaa kuleylka. Raad-raaca lagu daray alloysku wuxuu dhiirrigeliyaa filimka xabagta ee jirka lagu hagaajiyo si loogu sameeyo geedi socodka kuleylka, taas oo hagaajineysa caabbinta 'alxanka' ee heerkulka sare. Iyada oo gacan laga helayo walxaha raadraaca, caabbinta qulqulka ayaa si weyn loogu hagaajiyay heerkulka sare. Wax soo saarka ayaan is beddelin ka dib heer kul kulmey muddo dheer.
Hore: Marin dhuuban oo Wanaagsan Nadiifinta Gaaska
Xiga: HRE silig kululaynta iska caabinta
Silig kululaynta korontada, Heerkulka High silig koronto, Alaab-qeybiye koronto kululeeyaha, Silig koronto oo adkaysi u leh, Silig iska caabinta korontada, Fiilooyinka kululeeyaha korontada,